Kenya oo war kasoo saartay meydka wadaad caan ah oo laga helay gaarisa - iftineducation.com
Kenya oo war kasoo saartay meydka wadaad caan ah oo laga helay gaarisa
iftineducation.com – Meydka wadaadkaan muslimka ah ayaa laga helay deegaanka Embu oo ku yaala waqooyi bari dalka Kenya, maalmo kadib markii wadaadkaasi ay xireen ciidamada dowlada Kenya, iyagoo u kaxeystay goob aan la garaneynin.
Qaar ka mid ah hoggaamiyaasha Muslimiinta magaalada Gaarisa ayaa sheegay in wadaadkaasi ay beegsadeen waxay ku sheegeen ciidamada ka hortaga argagixisada oo ka tirsan ciidamada booliska kenya.
Sheekh Maxamed Cali Kheyr oo lagu naaysi jiray Sheekh Dawaara, ayaa maalin kaddib afduubkiisa, sabtidii aynu soo dhaafnay waxaa Meydkiisa laga helay meel Bulaacad ah oo ku taallo deegaanka Embu oo ka tirsan Gobalka Eastern Kenya.
Magaalada Gaarisa, ayaa shalay waxaa ka jiray buuq iyo daganaasho la’aan kadib markii dadka ku dhaqan magaaladaas ay isku soo baxeen, ayagoo sheegay iney ka xun yihiin dilka wadaadkaas oo shalay meydkiisa dib loogu celiyay magaaladaas isla markaasna lagu aasay.
Dhanka kale,wadaadka la dilay oo ahaa Ganacsade caan ka ah gobalka waqooyi bari Kenya, ayaa rag hubeysan ay xoog ku saareen baabuur ay wateen, xili ay gacmaha ka xireen Khamiistii aynu soo dhaafnay isagoo ku sugnaa wadada lagu magacaabo Post-da ee dhex marto magaalada Gaarisa, sida ay warbaahinta u sheegeen dad goob joogayaal ahaa.
Wadaadkaasi ayaa lala xiriiray ururka Al-shabaab ee ka dagaallama dalka Soomaaliya, waxaana lagu eedeeyay inuu dhallinyarada kaga qorayay magaalada Mombasa.
Hay’adda xuquuqda aadanah ayaa ciidamada booliska dalka kenya ku eedeeyay inay ka dambeeyaan beegsiga wadaadada muslimiinta ee dalka Kenya.
Muungaab oo gabadhiisa curada ah ugu deeqay Raiisul wasaaraha Daawo muuqaal xiisa leh
Kenya oo ceeb dhexda ka taagan kadib damacii raqiiska ahaa ee Zakariye iyo Guul usoo hoyatay ciidanka dalkeena